तिथि मेरो पत्रु »7आधुनिक डेटिङ बारे कुरूप सत्य
डेटिङ लामो समय देखि पश्चिमी संस्कृति को एक भाग भएको छ. तथापि, आज को डेटिङ को 60s समयमा यो हुन प्रयोग कुराबाट अलग छ, 70को, 80को र पनि 90 को दशक.
डेटिङ वेबसाइट को उद्भव इन्टरनेटको र यो संग आगमन यो परिवर्तन लागि एकदम हद सम्म जिम्मेवार छ. राम्रो र अधिक रोमाञ्चक आधुनिक दिन डेटिङ कुराहरू धेरै छन्, जबकि (अनलाइन डेटिङ पक्कै तिनिहरुमध्ये एक छ), अवगुण को उपस्थिति पनि अस्वीकार गर्न सकिँदैन. तल तपाईं ती अवगुण संग परिचित गर्न अनुमति दिन्छ कि आधुनिक डेटिङ बारे केही कुरूप सत्य हो.
1. मान्छे लगभग हरेक अन्य कुरा गर्न बिर्सेका छन्
सजिलो सञ्चार प्रविधिको संग मानिसहरूलाई प्रदान गरेको छ कि सबै भन्दा ठूलो उपहार को एक छ. आज, प्रेम मा मान्छे पनि तिनीहरूले दूरी मा हो प्रत्येक अन्य सम्पर्कमा रहन प्राप्त. तथापि, प्रविधिको यो प्रगति पनि कुरा गर्न मानिसहरू उद्देश्य हत्या गरेको छ.
हो, तपाईं सही पढेका; आज अधिकांश मानिसहरू आफ्नो प्रिय को आवाज सुन्न लालसा छैन, पाठ सन्देश को एक श्रृंखला तिनीहरूलाई लागि काम गर्न. फोन के? ओह, सबै भन्दा लागि ती विगतको कुरा हो.
2. तपाईं एक हो, तपाईं अनभिज्ञ छन् भने
तपाईं कसैको हृदय जित्न चाहन्छौं? आज, त्यो काम को सजिलो तरिका अनभिज्ञ भएर छ. तपाईं आफ्नो डेटिङ साथी अधिक आकर्षक प्रकट हुनेछ, तपाईं कम परवाह भने. यी दिन, लगभग कुनै एक चासो देखाउने व्यक्तिहरूलाई चासो देखिन्छ.
3. प्रतिक्रियाहरू लगभग सधैं छली
डिकोडिङ्गका प्रतिक्रिया जहाँसम्म वर्तमान पुस्ता को मान्छे चिन्तित छन् रूपमा लगभग असम्भव छ. सबै प्रभावित तपाईं संग छैन व्यक्तिले नै तरिका व्यवहार र तपाईं साँच्चै रुचि छ एक व्यक्तिको रूपमा उनको / उनको अनुहार यस्तै नजर छ. अधिकांश मान्छे, आज, भावनाहरू व्यक्त र तिनीहरूले यो एउटा राम्रो गुण हो सोच्न कसरी बिर्सेका छन्.
4. मुद्रा, पैसा र पैसा र त्यसपछि उपस्थिति आउछ
माथिको कथन मानिसका लागि मुख्यतया साँचो हो; महिलाका लागि, यो अन्य तरिका गोल हुनेछ (उपस्थिति त पहिलो र पैसा आउँछ). छोटकरीमा, के तपाईं रुचि हुनेछ डेटिङ गर्दै व्यक्ति तपाईं जहाँसम्म यी दुई कारक चिन्तित छन् स्थानमा छन् जहाँ निर्भर कि. हो, मात्र यी दुई; अरू सबै कुरा यी पछि आउछ.
5. कुराहरू पनि रोमान्टिक हुन सङ्गठित छन्
रोमान्टिक ह्याङआउट आयोजना आज पनि सजिलो भएको छ. तपाईं एक फोन कल बनाउन र सेवा प्रदायकको तपाईं को लागि एक मोमबत्ती प्रकाश खाने व्यवस्थित हुनेछ. यो पहिले यस्तो योजना संगत गर्न प्रयोग आकर्षण एक फिक्का एकदम छ.
6. गोपनीयता? के गोपनीयता?
आज भेटघाट गर्नेबारे निजी केही छैन. तपाईं दिउँसो एक व्यक्ति दिनांक छ र तपाईं अन्य व्यक्तिको सामाजिक मिडिया सँगै क्लिक को साँझ द्वारा तपाईं डरावना वाक्यांश संग टिप्पणी को एक श्रृंखला पछि खाता दुई फोटो देख्ने. तपाईं यसलाई प्रयोग गर्दै भने, तपाईं यो पुस्ता अधिकार छैन.
7. यो भन्दा बढी छ भन्दछन् अब त सजिलो छ
बस एक पाठ र आफ्नो साथी तपाईंलाई कुनै उहाँलाई मा अधिक रुचि हो भनेर थाह हुनेछ / उनको. कहिलेकाहीं टुक्रिन पदहरू बस एक जोडी शब्दहरू समावेश. कि सजिलो साँच्चै सम्बन्ध तोडेर छ?
आज, मान्छे पक्कै बढी अधीर र आकस्मिक भएका छन्; समय अभाव पनि एक प्रमुख भूतप्रेतको छ. तथापि, तिनीहरूले अझै पनि प्रेम गर्न र प्रेम गर्न चाहनुहुन्छ कि अस्वीकार गर्न सकिँदैन. त्यसैले, डेटिङ रूपमा रोमान्टिक र रोमाञ्चक हुन्छ जब यो विगतमा हुन प्रयोग गरिएको चाँडै एक समय आउन सक्छ.